Nnukwu ndebiri ndebanye aha na-erughị euro | Esi m mac
Nnukwu ndebiri nke Keynote maka ihe na-erughị euro
Nsogbu mbu nke onye edemede bu akwukwo ederede. Mana obughi soso ndi dere akwukwo, kamakwa ndi mmadu aghaputara akwukwo, ihe ngosi, akwukwo ma obu akwukwo ozo n’udi ozo n’emeghi ya. Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye anyị ndebiri dị iche iche, ndebiri nke na-enye anyị ohere ịmepụta akwụkwọ ọsọ ọsọ ma nwee ike ịhazi data na ozi niile anyị bu n'uche. Taa, anyị na-ekwu maka Theme Lab maka Key, ngwa nke ahụ na-enye anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndebiri iji mee ngwa ngwa na ngwa Apple Keynote.
Ekele maka Lablọ nyocha Okwu maka Keynote anyị nwere ihe karịrị 100 ndebiri dị iche iche, yana imepụta ọkachamara na ahaziri nke ọma, nke anyị nwere ike gbanwee ka ọ masị anyị iji gbanwee ya na mkpa anyị. All ndebiri awa site Okwu ụlọ nyocha mejupụtara 32 slides na a ụdị dịgasị iche iche ebe anyị nwere ike itinye onyonyo ma ọ bụ ederede, yana eserese. A na-enweta slide ọ bụla na usoro 4: 3 ma ọ bụ 16: 9, iji dabaa nha ihuenyo niile ka dị na ahịa.
Gbanwe ndebiri nke ọ bụla dị mfe ma ọ dịghị achọ nnukwu ihe ọmụma iji nwee ike ịhazi ma gbanwee ha maka mkpa anyị. Anyị nwekwara ike ịgbanwe nha nke font ahụ, agba nke nzụlite ya, yana ihichapụ ya, mee ka ọ buru ibu ... . Lọ nyocha template a, ọ bụrụ na anyị atụgharịa ya n'ụzọ nkịtị, Ọ nwere ọnụahịa mbụ nke euro 19,99, mana rue Eprel 19 ọzọ, anyị nwere ike irite uru nke onyinye ahụ wee budata ya ihe na-erughị otu euro, euro 0,99 site na njikọ nke m na-ahapụ na njedebe nke isiokwu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Nnukwu ndebiri nke Keynote maka ihe na-erughị euro
Anyị enweela ngwa ngwa Zụrụ M otu achịcha maka Mac dị
Jiri njikọ na ọrụ gị, ya na ụzọ mkpirisi keyboard maka Mac